နောက်တွဲယာဉ်မော်ကွန်းတိုက် - Brick Fanatics
13 / 09 / 2021 13 / 09 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 82 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, 76194 Tony Stark ၏ Sakaarian Iron Man, 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomper, ကလင် Barton, Disney+, Hawkeye, ကိတ်ဆရာတော်, Lego, Lego မှ marvel, Loki, Marvel, အဆိုပါစွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီ Soldier, နောကျတှဲရထား, WandaVision, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?
06 / 09 / 2021 06 / 09 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 133 Views စာ0မှတ်ချက် Gamescom, gamescom 2021, Lego, Lego Star Wars, Lego Star Wars: Skywalker Saga, Star Wars, ကြော်ငြာအတို, Skywalker စစ်ကိုင်း, နောကျတှဲရထား, TT အားကစားပြိုင်ပွဲ
31 / 08 / 2021 31 / 08 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 185 Views စာ0မှတ်ချက် Black ကအာဒံကို, Dc, DC ကရုပ်ပြ, DC က Fandome, DC က Fandome 2021, Lego, Lego DC က, အသေးစား, ရောဘတ်ပတ်တင်ဆန်, Supergirl, အဆိုပါ Batman, အဆိုပါ Flash ကို, နောကျတှဲရထား, ဗွီဒီယိုဂိမ်း
24 / 08 / 2021 25 / 08 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 128 Views စာ0မှတ်ချက် 76184 Spider-Man Mysterio's Drone Attack vs., 76185 Spider-Man အဆိုပါ Sanctum အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှာ, 76195 Spider-Man's Drone Duel, အဲဖရက် Molina, ဆရာဝန် Octopus, အစိမ်းရောင် Goblin, Lego, Lego မှ marvel, Lego Spider-Man, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, MCU, ရှေဖရုံသီး, ရွှေဖရုံသီးဗုံး, Sony က, Spider-Man, Spider-Manဖြေ - အိမ်မှာမရှိဘူး, နောကျတှဲရထား
23 / 08 / 2021 23 / 08 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 164 Views စာ0မှတ်ချက် Lego, Lego ဂိမ်း, Lego ဂိမ်းများ, Lego ဂိမ်း, Lego Star Wars, Lego Star Wars: Skywalker Saga, Skywalker စစ်ကိုင်း, Star Wars, Skywalker စစ်ကိုင်း, နောကျတှဲရထား, တွစ်တာ, ဗွီဒီယိုဂိမ်း, ဗီဒီယိုဂိမ်းများ
31 / 07 / 2021 31 / 07 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 342 Views စာ0မှတ်ချက် 71031, 71031 Marvel စတူဒီယို, ပုရွက်ဆိတ်-Man, Captain America, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Disney+, Lego, lego coll ပါ, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, LEGO စုဆောင်း Minifigures 71031 Marvel စတူဒီယို, Lego မှ marvel, Lego Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego Spider-Man, Marvel, ပတေရုသက Parker, Scarlet စုန်းမ, စကော့လန်း, Scarlet စုန်းမ, နောကျတှဲရထား, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?
04 / 07 / 2021 04 / 07 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 194 Views စာ0မှတ်ချက် Disney+, ပထမဦးစွာမျှော်, Jurassic World, Jurassic World Cretaceous စခန်း, Lego, Lego Jurassic World, Lego Star Wars, Star Wars, Star Warsဖြေ, Star WarsVisions, အဆိုပါ Mandalorian, နောကျတှဲရထား, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?
06 / 06 / 2021 06 / 06 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 267 Views စာ0မှတ်ချက် Apple, Apple က Arcade, ဂိမ်း, Hidden Side, Jurassic World, Lego, Lego ရန်ပွဲ, Lego ဂိမ်း, Lego ဂိမ်းများ, Lego ဂိမ်း, Lego Hidden Side, Lego Jurassic World, Lego Ninjago, Lego ပင်လယ်ဓားပြများ, Lego Vidiyo, မိုဘိုင်း, မိုဘိုင်းဂိမ်း, မိုဘိုင်းဂိမ်း, Ninjago, ပင်လယ်ဓားပြများ, နောကျတှဲရထား, ဗွီဒီယိုဂိမ်း, ဗီဒီယိုဂိမ်းများ, Vidiyo, YouTube ကို